Sébastien Frey oo faallo ka bixiyay farqiga u dhexeeya laacibka reer Brazil ee Ronaldo iyo Cristiano – Gool FM
(Serie A) 13 Sept 2018. Goolhayihii hore ee reer France iyo kooxda Inter Milan ee Sébastien Frey ayaa ka hadlay isbarbardhiga halyayga reer Brazil ee Ronaldo iyo laacibka reer Portugal ee Cristiano Ronaldo ee dhawaan ku biiray kooxda Juventus.
“Halyayga reer Brazil ee Ronaldo ma garanayaan caruurta maanta, sidaasi darteed waxaan isku dayayaa in wiilkeyga aan u sharaxo, waa kuma Luís Nazário de Lima Ronaldo”.
“Inter Milan sanadii 1998 waxay heysatay ciyaartoyda ugu fiican aduunka sida laacibka reer Brazil ee Ronaldo, waa ciyaaryahan dhameystiran mana jirto cid lala barbardhigi karo”.
“laacibka haatan ee Cristiano Ronaldo waa kan ugu sarreeya, laakiin qof walba waa inuu ogaadaa in halyayga reer Brazil uu ka horeeyo qof walba, sidoo kale wuxuu ku wanaagsanaa dhanka bini aadam nimada”.
33 jirkaan reer Portugal ee Cristiano Ronaldo ayaa u wareegay Juventus suqii xagaaga kadib markii uu kaga soo biiray Real Madrid ee Real Madrid aduun dhan 100 milyan oo euros.
“U dhaqaaqisteyda kooxda Manchester City waa go'aanka ugu fiican nolosheyda”…. David Silva